Malunga neBuddha Trends
I-Buddhatrend yasungulwa eMontreal, eCanada ukuba inikezele abafazi behlabathi lonke, ithuba lokuba libukeke lihlukile kwisihlwele kwaye zivakalise ngokwenene ngendlela yokuqala abagqoka ngayo.
Inkampani ikholelwa ukuba abafazi bafanelwe ukugqoka nayiphi na indlela yokufashisha abayifumanayo kwaye bayifumaneke ngokukhawuleza kwi-intanethi.
I-Buddhatrends nayoi-one-stop-shop for all Spirits Free kwilapho:Abaculi, abahambi, abaBhomiya, iiHippies kunye nabo bonke abafaziNgubani ayifuni ntokodwa ku ukubonisa ukuhamba kwabo okulungileyo ngokutshintshana kwabo.Umphefumlo okhululekile kuthi ufuna inkululeko kuyo yonke into esiyenzayo, ngakumbi indlela esiziphethe ngayo. Yiyiphi enye indlela engcono yokubonisa ukuziphatha kwakho okwenene kunendlela ogqoka ngayo nendlela obukeka ngayo. I-Buddhatrend akuyena nje ivenkile ye-Wanderers kodwa isikhokelo sendlela yokuphila yabasetyhini banamhlanje abakhanyayo abazi ukuba benze ingxelo abayifunayo ngokwenene.
Kwii-Buddhatrends, sikholelwa inkululeko yakho yokukhetha isitayela sakho, kwaye sixabisa ixesha lakho, induduzo kwaye kunjalo, ibonakala. Ngako oko, sihlaba umhlaba ukufumana iimveliso ezingcono ukuzongeza kwiiqoqo zethu kuwe, izinto ezibandakanya imimoya ekhululekile. Siphatha kuphela loo mveliso esinomdla ngokubaluleka kwabo, ukuchaneka, ukungafani kunye nokuthuthuzela. Iikholeji zethu zijolise ekuwandiseni ukhetho lwakho, kodwa awuyi kufumana nantoni na ehambelanayo nomoya oqhelekileyo kwi-Buddhatrends kuba sikholelwa ekugqibeleni, ukuba ufanelwe inkululeko yokuzikhethela kwaye kukukudala ukuba ukhangele ubume bakho!
Njengemimoya ekhululekileyo, sinokuzimisela ukuzisa kuphela okulungileyo kuwe.Sula ngeqoqo lethu kwaye sizenzele kwiindawo zokunethezeka zokugqoka ezihlukile Ii-Overalls & Jumpsuits, ukuthoba Izambatho zoMkhulu, ILinen Palazzo Pants kunye nezixhobo zokubonisa imibala yakho yoqobo. Iikholeji zethu ezikhethiweyo ziphefumlelwe umoya omtsha, oyingqayizivele kunye nokukhulula njengawe. I-Buddhatrends ikunika iingubo kunye nezixhobo kuzo zonke iimeko. Hlanganisa kwaye udibanise uze ulungise ukulungiswa kwefestile ukusuka elunxwemeni ukuya kwisitalato!
Ngaphandle kokukunceda ukhangele okusemgangathweni lwakho olukhethiweyo, silwela ukwenza konke ukuthengwa ngamava amahle kuwe. Yinto ephambili yethu yokukunika inkonzo ephezulu kakhulu yokuthengiswa komthengi, ukucwangciswa kokukhawuleza ngokukhawuleza, ixesha lokuthunyelwa ngokufanelekileyo, kunye nenqubomgomo yokubuyisela inkululeko.
Ukuba ungumvakatye wexesha lokuqala, siyakwamkela ngentliziyo yonke kwaye sinethemba lokuba uya kuvuyiswa yiyo yonke into ejongene nawe yokuthenga nge-Buddhatrends. Ukuba ungumlondolozi wethu omdala kunye nomthengi obuyelayo, siyakubulela kuwe ngenkxaso yakho kwaye uthemba kuthi kunye nokuqokelela kweemveliso.
Sixabisa ingxelo yakho, nokuba awusekele okanye eyakhayo kwaye isebenza ngokuqhubekayo ukuphucula sakho isipiliyoni sokuthenga nathi.
IQela leNkxaso yeBuddhatrends